Atụmatụ Ntuziaka Ahịa | Martech Zone
Atụmatụ Nkwado Ahịa
Mgbanwe ahịa na ahịa ndị na-agbanwe agbanwe na-ekwupụta otu anyị si azụ ahịa. Kpọmkwem, nke a na-ezo aka n'ahịa ahịa si abịaru olileanya ọhụrụ ma mechie azụmahịa ahụ. Nkwado ahịa na-emekọrịta ahịa na ahịa ka ị na-enweta ego. Ijide n'aka na atumatu ndị a kwekọrịtara dị oke mkpa maka ọganiihu nke ahịa na ọrịre.
Dịka onye na-azụ ahịa, n'ezie achọrọ m mbọ mbọ azụmaahịa dị mkpa. Ma na njedebe nke ụbọchị (dabere na ọnọdụ ahụ), ndị ahịa ahụ ka ga-enwe mmetụta "siri ike" karị na atụmanya n'ihi na enwere nkwukọrịta onwe onye na nke onwe (ozugbo ha mere ka ọ gafere ikike dabere na ikike ma ọ bụ kpọtụrụ onye na-). Inwe atụmatụ atumatu banyere otu esi agakwuru olile anya site na onodu ahia na adi ugbua karie oge obula. Ezie na ahịa okirikiri nwere ike dị ka ogologo dị ka ahịa okirikiri, onye ọ bụla aka isi ihe nwere ike ikpebi ma ị bụ nso a na-anọdụ ala na atụmanya ma ọ bụ na ha na-eme na-agwa gị okwu ruo mgbe ebighị ebi.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgba mbọ hụ na ị zọchara nzukọ ahụ nso, yabụ lee ụfọdụ ahịa enyemaka Atụmatụ:
Nwee obi uto maka udiri agwa gi na udiri mmuta gi. Ndị mmadụ na-amụta ma na-agbaze ọdịnaya n'ụzọ dị iche iche. Kpọmkwem, enwere ụdị mmụta 3: nyocha, anya, na kinesthetic.
Ọ bụrụ na atụmanya gị yiri ka ọ na-amụta site na “ịnụ” ihe ị na-ekwu, gbaa mbọ tinye pọdkastị, njikọta mmekọrịta mmadụ na ibe gị, ma ọ bụ vidiyo na atụmatụ gị. Ndị a bụ ndị na-ajụ ọdịnaya nke ga-emetụta ụdị atụmanya a.
Ọ bụrụ na atụmanya gị ga-azaghachi ihe na eserese, eserese, ma ọ bụ foto, mgbe ahụ ị nwere onye na-ahụ ihe ọhụụ na aka gị. Nke a bụ ụdị onye a kacha mara amara. Otutu udiri ihe di iche iche na-adi onye mmuta a - vidio, infographics, ebook, whitepapers, onyonyo, wdg. Oburu na I “gosi” olile-anya ihe ichoro, ha kariri ighota ma tinye ihe di nkpa n’ihe ichoro
N'ikpeazụ, e nwere ndị na-amụ kinesthetic, ndị na-amụta site na ime. Nke a na-esiri gị ike ijikwa site na ịre ahịa ọdịnaya, mana enwere ike ịme ya. Ha choro “otu esi aga” ndu ma obu ọdịnaya nke na agwa ha “otu ha g’esi nwee ihe ịga nke ọma. Akwụkwọ ahụaja, akwụkwọ ntanetị, vidio, na webụars nke lekwasịrị anya otu esi arụzu ihe dị mma maka ụdị atụmanya a. Igosi nka na inye ha ihe omuma a di nkpa.
Kpachara anya banyere ụzọ ọ bụla ị ga-esi mee ya. Na mkpokọta, ọ nweghị otu onye na-eme mkpebi na ụlọ ọrụ. Ikpebi itinye ego na ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa bụ mkpebi otu. Ọ bụ ezie na enwere ụfọdụ ndị nwere ọtụtụ ikwu karịa ndị ọzọ, ọ dị mkpa ịrịọ ọtụtụ ndị ọzọ n'ime usoro mkpebi.
Kedu ndị ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị ga-erite uru? Nke a nwere ike ịgụnye azụmaahịa, ire ahịa, arụmọrụ na nrụpụta (akara ala). You chọpụtala otu ngwaahịa / ọrụ gị si enyere onye ọ bụla aka?
Anyị na-ahụ na-abawanye nke ajụjụ oku-na-edinam. Kama ịgwa atụmanya ime ihe, ụlọ ọrụ na-ajụ ajụjụ iji gbaa ume site na saịtị ha. Ndị mmadụ n'otu n'otu na-eme mkpebi dabere na ihe kacha mma maka ha - ọdịnaya gbara gburugburu “personas” ga-enyere aka mee ka otu mkpebi ahụ kwenye.
Anyị ire ahịa onye nkwado, TinderBox, na-enye ohere iji mepụta atụmatụ mgbasa ozi bara ụba nke ga-amasị ụdị ọ bụla nke ndị mmụta, yana ịmara onye na-elele atụmatụ gị. Usoro ndị a ga - enyere aka mechie nkwekọrịta ahụ ma mepụta profaịlụ ndị ahịa. Nhazi usoro ịre ahịa bụ isi ihe na-aga nke ọma n'ịgba ahịa. Mụta otu esi emepụta atụmatụ ahịa dị irè ga-abawanye ntụgharị na pịa gafee.
Kedu ndụmọdụ nkwado ndị ọzọ ị nwere? Kedu ihe ọzọ ị na-ahụ na ụlọ ọrụ ahụ?
Tags: nkwurịta okwucontent MarketingNa-atụ anyaNkwado ire ahịaahịa enyemaka Atụmatụ
Omume kacha mma na SEO na 2013: Iwu 7 nke Egwuregwu